Yibayinxalenye - BullyingCanada
kubantu abafana nawe
sindisa ubomi. Nika abantwana abaxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo Nikela Ngoku Yiba ngumahluko obalulekileyo
kubantwana abaxhatshazwayo. Faka isicelo namhlanje Yiba yindlela yokuphila kunye BullyingCanada Yiba ngummeli
kubantwana baseCanada abaxhatshazwayo. Ukusebenza ngokuthe ngqo nabantwana abafumana ukwenzakala hayi kuwe?
BullyingCanada unesidingo esikhulu samavolontiya ukuncedisa kwimisebenzi emininzi yasemva kweofisi. joyina BullyingCanada Zibandakanye Namhlanje
Buyela Ulonwabo kuLutsha lwaseKhanada oluxhatshazwayo
Abantwana abasengxakini, kulo lonke ilizwe, bala BullyingCanada yonke iyure yonke imihla.
Ithemba Kubantwana Abangamaxhoba
Unokwenza impembelelo enkulu kubomi babantwana abaxhatshazwayo kunye neentsapho zabo nje $ 21 ngenyanga
Okukhona umntwana engcungcuthekiswa ixesha elide, kokukhona efumana amanxeba emzimbeni, ngokweemvakalelo nangokwengqondo anokuhlala ubomi bakhe bonke. Ukuxhatshazwa kunokuphelisa ukuzithemba, ukushiya abantwana behoxisiwe kwaye bengakhuselekanga-kunye nokuhlaselwa kwe-panic, isisu esibuhlungu kunye namaphupha amabi. Abakwazi kugxininisa esikolweni, nto leyo ekhokelela ekuphumeleleni kwamanqaku anokuthi acuthe amathuba abo ekamva. Xa ukungcungcuthekiswa kungayekeleli, ukudandatheka noxinezeleko kunokukhokelela abantwana ekubeni bazibulale.
Kufuna inkalipho enkulu ukuba abantwana bafikelele kuthi ukuze bafumane uncedo. Ububele bakho kusinceda ukuba siqinisekise ukuba sonke isikhalo esibuhlungu sokucela uncedo siyaphendulwa. Iyure nganye. Yonke imihla.
BullyingCanada Usindisa Ubomi
Ukunikezela ngenyathelo elikhawulezileyo nelovelwano ukuxhasa ulutsha oluxhatshazwayo, BullyingCanada ineenkqubo ezahlukeneyo kunye neenkonzo zokulwa ubundlavini kwilizwe lonke.
ulutsha lusebenze ngo-2020
iminyaka yenkonzo yothando BullyingCanada ifuna ukunceda abantwana abasemngciphekweni
Hlola oku BullyingCanada Uhluko
BullyingCanada iye yamkelwa kwihlabathi jikelele ngeendlela zayo zokungenelela ezikhethekileyo ekuncedeni abantwana abaxhatshazwayo ukuba baphelise ukwenzakala kwabo. Funda ngakumbi malunga BullyingCanada kunye nemizamo yayo namhlanje:
Nceda unikele ngoku
Inkxaso Bullying Canada Namhlanje
Amashumi amawaka olutsha kulo lonke elaseKhanada afumana uncedo olubalulekileyo kuthi nyaka ngamnye-izigidi ezingakumbi kwihlabathi jikelele xhomekeka kwi BullyingCanada izixhobo zokunceda kwiimeko zabo.
Nceda uqinisekise yonke ifowuni iyaphendulwa ngokwenza isipho sesisa, esixhuzulwa irhafu.
Nceda ukunika abantwana abaxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo.
Jonga Amathuba Namhlanje